Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMary
I-Potting Shed, evalelwe tu kwaphela, isekwe kwiGadi eNdonga yeVictori yeNkulungwane ye-18. Sinikezela ngendawo yokuhlala yodidi oluphezulu, indawo yokubuyela umva iyonke, enemibono engakholelekiyo. Ukubonelela ngekhitshi / igumbi lokuhlala c / w isitshisi seenkuni, iTV / iDVD, iingcango zepatio ukuya kwindawo yangasese ye-BBQ, igumbi lokulala, ishawari / indlu yangasese / isitya esiphantsi komgangatho wokufudumeza kuyo yonke indawo. Ilungele ikhefu lothando, iiholide ezimbini, nabani na othanda iigadi, okanye ofuna ukuphumla ngokupheleleyo kwindawo engasese.
Ibekwe kwigadi ebiyelwe ngodonga, iPotting Shed esandul' ukuguqulwa incasa igqityiwe yaya kumgangatho ongakholelekiyo, ngelixa igcina uninzi lweempawu zokuqala kangangoko kunokwenzeka. I-Potting Shed isekwe kwiigadi ezintle, ezijikelezwe ludonga lwebanga lesibini oludweliswe yivictorian.
Ngaphakathi le ndawo yokuhlala inegumbi lokulala eliphindwe kabini, eline-ensuite, kunye nekhitshi / indawo yegumbi lokuhlala elinesitshisi seenkuni, i-tv / i-dvd, itafile yokutyela ezimbini. Kukho iingcango zepatio ezikhokelela kwindawo yakho yabucala yangaphandle, apho unokuhlala khona kwitafile engaphandle ujonge phezu kwentlambo engezantsi, ukutshiswa lilanga ngasese, okanye usebenzise i-BBQ. Sinomgaqo-nkqubo ongqongqo we-HAYI wokutshayela kwindawo yokuhlala, kodwa sivumele ukutshaya kwindawo yangasese. Nceda uwuhloniphe lo mgaqo-nkqubo ukuze kuxhamle abo balandelayo.
Simalunga neekhilomitha ezi-1 ukusuka kwidolophu yaseTorrington, kodwa sibekwe emaphandleni, kude nayo yonke ingxolo yendlela, singqongwe ngamasimi nemithi. Ekuphela kwengxolo omele uyive iya kuba yingoma yeentaka. I-RHS GARDEN ROSRMOOR kukuhamba ngemizuzu emi-5 kuphela. Igadi ekhangayo yeehektare ezingama-65 yobuhle obunxilisayo, igcina isiseko sendawo yasemaphandleni kuMntla weDevon ngaphakathi komgangatho omangalisayo wamacala entlambo enemithi.
Umxholo wethu kukuba awuphazamiseki ngexesha lokuhlala kwakho, ngaphandle kokuba uze kuthi naziphi na izicelo, apho siya kubonelela ngoncedo ngayo nantoni na esinokuyenza.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Little Torrington